शनिबार, कार्तिक २५, २०७४ ००:००:०० | Comments
शशीविक्रम कार्की, प्रतिनिधि सभा उमेद्वार, विवेकशील साझा पार्टी, भक्तपुर क्षेत्र नं २
शशीविक्रम कार्की । विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा भक्तपुर क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा उम्मेद्वार । विगतमा स्वास्थ्य माफियाविरुद्ध डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा अग्रणीरुपमा देखिएका जुझारु युवा कार्की माफिया र भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने अभियानका साथ निर्वाचनमा होमिएका छन् । उनै कार्कीसँग गरेको कुराकानी :
पहिला चुनावकै कुरा गरौं, कस्तो चल्दैछ प्रचार प्रसार ?
हामी घरदैलो गर्दैछौं । उमेद्वारी दर्ता लगत्तै हाम्रा पार्टीका एक संयोजक रविन्द्र मिश्र, अन्य केन्द्रीय सदस्यहरु तथा भक्तपुर जिल्लाका उमेद्वारहरु सहित नागरिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि ग¥यौं । त्यसमा आम नागरिकको उलेख्य सहभागिता थियो । हिजोआज हामी हरेक दिन मतदाताको घरदैलौमा गएर भोट माग्दै छौं । र, सोचेभन्दा धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका पनि छौं । जसले गर्दा म निक्कै उत्साही छु ।
तपाइलाई प्रचारप्रसारमा हिँड्दा जनताले विगतमा नेताले आश्वासन बाँढेको र काम नगरेको गुनासो गर्दै ‘तपाइ पनि त्यस्तै नेता त होला नि’ भन्नेहरु कत्तिको भेटिए ?
एकदम धेरै । चुनाव, नेता, राजनीति, भोटजस्ता शब्दसंग बितृष्णा छ नागरिकहरुको । धेरैले त गाली नै गर्नुहुन्छ । अनि बिस्तारै हामी जब बुझाउन थाल्छौ तब अलि शान्त हुनुहुन्छ र अन्त्यमा ‘जितेपछि तिनै पुरानै जस्तैचाहिँ हुन पाईदैन नि’ भन्नुहुन्छ । हामी सक्केसम्म बिस्वाश दिलाउने प्रयासमा छौं ।
आफ्नो जितको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा हामीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्दा र मपनि यस पटकको निर्वाचनमा उमेद्वार हुन्छु भन्दा आफैलाई एउटा सानो विकल्पसम्म हुन सकिएला जस्तो लागेको थियो । तर, चुनावी प्रचार–प्रसारमा लागिरहँदा नागरिकहरुको अपेक्षा, हामी युवाको जोस र होस देखेर हामीमाथि गर्नुभएको भरोसाले जितिन्छ भने बिस्वाश बढ्दै गएको छ । हामीले जति धेरै चुनावी अभियान मार्फत नागरिकसम्म पुग्न सक्यौ त्यति नै हाम्रो जित्ने सम्भावना बढ्छ ।
आजको दिनमा संसदमा भएको कुनै एउटा राजनीतिक दल मात्र सक्षम भएको भए पनि कुनै पनि स्थानमा भ्रष्टाचार यस्तो डरलाग्दो रुपमा झाँगिने थिएन । न्यायलय पनि यसबाट अछुतो छैन । हामी संसदमा पुगेपछि हाम्रो बिशेष ध्यान भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु नै हुने छ ।
तपाइहरुको मुख्य एजेन्डाचाँहि के हो ?
यदि यहाँले बिकासका एजेण्डाको कुरा गर्नुभएको हो भने यो प्रश्नको मेरो उत्तर अलि घुमाउरो लाग्न सक्छ । पहिले हामी विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी थियौ । र, हामीले एकीकरण हुने निर्णय ग¥यौं । हाम्रो विकासको एजेन्डा मिलेर हामी एकीकरण भएका होइनौं । हामी त दुई पार्टीको संस्कार मिलेर एकीकरण भएका हौं । पद्दति , पारदर्शिता, निष्ठा, उत्कृस्टताजस्ता मूल्य मान्यताहरुले मात्र राजनीतिमा सुसंस्कार स्थापना गर्न सक्दछ र सुसंस्कृत राजनीति नै समृद्धिको आधार हो । त्यसैले सुसंस्कृत राजनीतिको स्थापना नै हाम्रो पहिले एजेन्डा हो ।
तपाइ भ्रष्टाचारीलाई विस्थापित गर्ने चुनावी नारा लिएर हिड्नुभएको छ तर विगतमा विवेकशील साझा पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्ध त लगभग मौन नै बसेको देखिन्छ नि होइन ?
त्यसो होइन । विगतमा हामीले भ्रस्टाचार बिरुद्ध विभिन्न अभियान संचालन गरेका छौं । डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा हामीले चलाएका ‘लूटतन्त्रविरुद्ध पागल अभियान’ नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्धको एक ससक्त अभियान थियो र यो लडाई अझै जारी छ । त्यस बाहेक ‘पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो सरकार ?’ ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सूचनाको हक अभियान’ जस्ता अभियानहरु हामीले संचानल गरेका छौं । निर्वाचनपछि पनि हामी ‘लूटतन्त्र’ विरुद्धको अभियानहरु लाई अझ ससक्त ढंगले अगाडी वढाउने छौं ।
देशको सर्वोच्च निकाय न्यायालयले नै भ्रष्टाचारीलाई सुनपानी छर्किरहेका बेला तपाइहरु भ्रष्टाचारीलाई पाखा लगाउन सफल हुने सम्भावना छ ?
त्यसैको लागि हामी राजनीतिमा होमिएका हौँ । आजको दिनमा संसदमा भएको कुनै एउटा राजनीतिक दल मात्र सक्षम भएको भए पनि कुनै पनि स्थानमा भ्रष्टाचार यस्तो डरलाग्दो रुपमा झाँगिने थिएन । न्यायलय पनि यसबाट अछुतो छैन । हामी संसदमा पुगेपछि हाम्रो बिशेष ध्यान भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु नै हुने छ । आवश्यक परे विकाउ न्यायाधीशहरु विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नेछौं । मिडिया, सामाजिक अभियन्ताहरुको सहकार्यमा भ्रष्टहरुलाई नागरिक समक्ष ल्याउने छौं । जनचेतनाका लागि भ्रष्टाचारका मुद्दा बहसहरु हरेक स्थानमा पु¥याउनेछौं । केही समय लाग्ला, तर यो सम्भव छ ।
चुनावमा नेताहरुले कराडौं रुपैयाँ खर्च गरेको सुनिन्छ । तर, तपाइहरु चुनाव खर्चका लागि एकसय रुपैयाँ मागिरहनु भएको छ । एक एकसय रुपैयाँ उठाएर करोडौं खर्च धान्न सकिन्छ ?
हो, मैले ‘तपाईको रु १००को सहयोग, चुनावमा गर्नेछु पारदर्शी प्रयोग’ भनेर चुनाव खर्चको लागि सय रुपैयाँ अभियान सुरु गरेको छु । म नागरिकहरुकै सहयोगले निर्वाचन लड्न चाहन्छु । अनि रह्यो करोड खर्च गर्ने कुरो । म पैसा खर्च गर्न र पदमा पुगेपछि राज्यकोष दोहन गरेर खर्च, खर्चको ब्याज असुल्न राजनीतिमा आएको होइन । अर्को कुरो, हामी रक्सी, मासु, भोज–भतेर जस्ता कुसंस्कारका बिरोधी हौं । अहिल सम्म करिब डेड लाख आर्थिक सहयोग जुटेको छ । चुनावभरि धेरै भए ३ लाख खर्च होला भन्ने सोचेको छु । त्यतिले मेरो चुनाव खर्च चल्छ ।
डन र धनको राजनीति चलिरहेका बेला मनको राजनीति गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदोरहेछ ?
सच्चिकै भन्नुपर्दा मलाई एक रत्ति पनि गाह्रो लागेको छैन । बरु गौरव महसुस हुन्छ कि म भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ मा एक सक्षम र भरपर्दो विकल्प बनेर उभिन पाएको छु । मुलुक बनाउन सुसंस्कृत राजनीति स्थापना गर्न हामीले अग्रसरता लिएका छौं, तपाईहरु पनि साथ दिनुहोस्, यसपटक तराजुमा भोट हल्नुहोस् भनेर टोलटोल घुम्दा बस्ताबमै निक्कै खुशी लागिरहेको छ । बाँकी नागरिकहरुको हातमा छ ।
अहिलेको युवा जमात फोहरी खेल भन्दै राजनीतिबाट टाढिन थालेका छन्, अब तिनलाई समेट्न विवेकशील साझासँग के योजना छ ?
हरेक कोही राजनीति गर्न चाहँदैन तर समाजसेवा भनेपछि सबैलाई रमाइलो लाग्ने बिषय हो । मैले पनि समाजका लागि केही गर्न पर्छ भन्ने भावना अधिकांशमा छ त्यसैले समाजसेवा नै राजनीति हो भनेर बुझाउन लागिपरेका छौँ । साथै विभिन्न सामाजिक अभियानहरु पनि संचालन गरिरहेका छौं ।
सबै दलबाट जनताले धोका नै पाएको अहिलेको अवस्थामा विवेकशील साझामाथि विश्वास गर्ने आधार के छ ?
राजनीतिमा ‘पद’ र ‘पैसा’ भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण भन्ने हामीले बुझ्यौं । नेपाली राजनीतिक दलहरुमा पुस्ता हस्तान्तरणको चलन भएन । एउटै व्यक्ति २०÷२५ वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख पदहरुमा बसिरहनाले उहाँहरु शक्तिकेन्द्रको रुपमा उदाउनु भयो जसले पार्टीभित्रै संस्थागत भ्रष्टाचार झांगियो । विवेकशील साझा पार्टीमा कोहीपनि व्यक्ति एउटै पदमा २ कार्यकाल भन्दा बढी बस्न पाउँदैन अर्थात पुस्ता हस्तान्तरणको ग्यारेन्टी छ । राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट र ओपन क्यान्डिडेट पोलिसीको व्यवस्था हामीले विधानमै गरेका छौं ।
हामी बन्द हड्तालजस्ता कार्यहरु कहिले गर्नेछैनौं । त्यस्ता कार्यहरुको सधै विरोध गरेका छौं र गर्नेछौँ । विरोधका रचनात्क तथा प्रभावकारी शैली विकास गरिरहेका छौं । हामी हाम्रो बचन र कर्म दुवैले हाम्रा भावी नेतृत्वहरुलाई निष्ठाको बाटो मात्र देखाउनेछौं । यी सबै कुराहरु नै विवेकशील साझा पार्टीलाई विस्वाश गर्ने आधार हुन् ।
विपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, ‘जव देश संकटमा पर्छ तव यो भूमिको एक मुट्ठी माटो हत्केलामा लिनु अनि आखाँ चिलेर सोच्नु, त्यस बखत तपाईको ब्रम्हले जे भन्छ त्यहि गर्नु ।’ मैले पनि एक मुट्ठी माटो हातमा लिएर, आँखा चिम्लेर मेरो ब्रम्हको आवाज सुनेर यो उमेद्वारी दिएको हुँ । तपाइँहरु पनि आँखा चिम्लेर आफ्नो ब्रम्हलाई सोध्नुहोस् अनि भोट हाल्नुहोस् ।